Sidee Orabrush ku galay Walmart | Martech Zone
Sidee Orabrush ku galay Walmart
Talaado, September 20, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Laba sano gudahood, Dr. Bob's Orabrush ka bilaabmay iibinta geerashka oo u iibgeeyey heer qaran Walmart kasta oo dalka ka mid ah. In ka badan 2 milyan oo nadiifiyahooda carrabka ah ayaa la iibiyey la'aanteed wax kasta oo xayaysiis dhaqameed.
Furaha istaraatiijiyadooda waxay ahayd olole suuqgeyn dagaal oo isku dhafan dhammaan dhinacyada ugu waxtarka badan ee ku saabsan suuq geynta fayraska iyo bartilmaameedka. Orabrush wuxuu noqday dareen Youtube ah, oo leh Neefsashada Xun kanaalka kasbanaya in ka badan 38 milyan oo aragti iyo 160,000 macaamiil ah, taas oo ka dhigaysa kan saddexaad ee ugu badan ee macaamiisha macaamiisha ah, kana dambeeya kaliya Old Spice iyo Apple. Inta aan ka warqabno, waa alaabtii ugu horreysay ee aan waxba ka tagin una baahin dalka oo dhan iyadoo la adeegsanayo Youtube.
Waa tan burburka istiraatiijiyadda suuq geynta cajiibka ah:
Mid ka mid ah shay caqli-gal ah ee istiraatiijiyadda guud ayaa lagu bartilmaameedsaday shaqaalaha Walmart ee Facebook iyada oo olole xayeysiis ah lagu doonayo in Orabrush lagu dhigo dukaamada. Orabrush hadda wuxuu iibiyaa qaran ahaan, wayna sameeyeen iyagoon weligood ubaahnayn inay booqdaan oo ay alaabada si toos ah ula wadaagaan shirkadda!
Cusbooneysiin: Hubso inaad dhageysato wareysiga cajiibka ah ee aan la yeelanay Jeffrey iyo Austin!
Sidee Loo Isticmaalaa Telefoonada Casriga ah?
Ma Bixinaysid La-taliyayaasha Warbaahinta Bulshada
Sep 20, 2011 at 4: 48 PM
Waa maxay calaamadaha sheekada hodanka ah, sidaas u qabow. Hadda Walmart waxay sidi doontaa badeecada Orabrush, shaqaalaha Walmart ee laga yaabo inay sharraxayaan wanaagga badeecadda ayaa laga yaabaa inay beddelaan codkooda. Tilmaamaha Tilmaamaha Ogolaanshaha FTC qasab ma ahan inay sameeyaan wicitaan faahfaahsan oo ku habboon shaqaalaha tafaariiqleyda wata alaabta, laakiin waa qayb ka mid ah xaqiiqda cusub ee isticmaalka marinnada bulshada ee oggolaanshaha.